Zingaphi iintlobo zokuzila ukutya ezikhoyo eBhayibhileni ▷ Discover Discover Online ▷ ➡️
Zingaphi iindidi zokuzila eziseBhayibhileni? El ngokukhawuleza sisenzo esenziwa sithi siyayeka ukutya okanye ukusela kangangexesha elithile. Ngokwembono yebhayibhile, isinceda ukuba sinxibelelane ngendlela yokomoya ngakumbi noThixo. Nangona kunjalo, nangona umntu enako ukuzila ukutya, ukuba unayo nayiphi na ingxaki yezempilo okanye ukhulelwe, thetha nogqirha wakho ngaphambi kokuba wenze, kuba into yokugqibela efunwa nguThixo kukuba uyonakalise impilo yakho.
Ibhayibhile iyasibonisa iintlobo ezintathu eziphambili zokuzila ukutya:
Ukuzila ukutya okukhethekileyo
Kwelinye icala, ikwathetha ngayo ezinye iintlobo zokungabikho.
1 Zingaphi iintlobo zokuzila ukutya ezikhoyo eBhayibhileni kunye nendlela yokuzenza
1.1 1. Ukukhawuleza ngokupheleleyo
1.2 2. Ukuzila ukutya kwamanzi
1.3 3. Ukuzila ngokukhawuleza okanye uDaniel ngokukhawuleza
1.4 4. Olunye ushiyeko
Zingaphi iintlobo zokuzila ukutya ezikhoyo eBhayibhileni kunye nendlela yokuzenza
1. Ukukhawuleza ngokupheleleyo
El ngokukhawuleza Itotali ibhekisa kuhlobo lokuzila apho akunakutya okanye usele nto. Olu hlobo lokuzila lolona lugqithisileyo kwaye akufuneki ziqheliselwe ngaphezulu kweentsuku ezimbini okanye ezintathu, kuba ukuchitha ixesha elide ngokukhawuleza kunokuyonakalisa impilo yakho kwaye kungadala ukufa. Lumka ke. Ukugula akumzukisi uThixo.
UEstere wathumela le mpendulo kuModekayi: “Hamba uye kuwaqokelela onke amaJuda alapha eSusa, nizile ukutya ngenxa yam. Musa ukutya okanye usele iintsuku ezintathu nobusuku bazo. Mna nezicaka zam siza kuzila ukutya njengawe. Emva koko ndiza kuya kukumkani, nangona oko kunxamnye nomthetho. Ukuba kufuneka ndife, ndiza kufa ”. UEstere 4 15:16
2. Ukuzila ukutya kwamanzi
Olu hlobo lokuzila lolona luqhelekileyo kwaye lunokuba njalo ziqhelise ixesha elide. Njengoko igama layo libonisa, Awunakutya nto, kodwa unako ukusela amanzi.
Oku kunokwenzeka ukuba ukuzila ukutya uYesu awayekwenza ngeentsuku ezingama-40 entlango.
Ukuba ukuzila ukutya kuya ngaphezulu kweentsuku ezi-3Kuyacetyiswa usele nezinye iintlobo zolwelo oluneswekile ukuze umzimba ungabinangxaki. Iziselo ezineswekile zinceda ukugcina impilo ngexesha elikhawulezayo.
Waza uYesu wakhokelelwa entlango nguMoya, ukuba ahendwe nguYesu umtyholi. Emva kokuzila ukutya iintsuku ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane, walamba. (UMateyu 4: 1-2)
3. Ukuzila ngokukhawuleza okanye UDaniel ngokukhawuleza
Ngokuzila ngokukhawuleza kukutya okumbalwa kuphela okususwayo ekutyeni. Kuyenzeka ukuba utye, kodwa ngendlela elula. Ungahlala ixesha elide kunezimbini ezidlulileyo ngaphandle kokonakalisa impilo yakho.
Ngokuzila ngokukhawuleza unokukhetha ukuba loluphi uhlobo lokutya ongazukukutya okwethutyana. Njengesiqhelo, Ngokwesiqhelo yenza ukutya okumnandi okanye okhethekileyo. Yehla kwi ukutya ngokungqongqo apho utya khona kuphela ukuze uphile. Kwelinye icala, olu hlobo lokuzila lukhawuleza ikhuselekile kubantu abanoluhlobo oluthile lwe ingxaki yempilo.
Ngelo xesha mna, Daniyeli, ndachitha iiveki ezintathu ndilila. Khange nditye nantoni na emnandi; inyama newayini endingazange ndiyive; kwaye andikhange ndisebenzise izinto ezinuka kamnandi de kudlule iiveki ezintathu. (Daniyeli 10: 2-3)
4. Olunye ushiyeko
Kuba ukuzila ukutya kusekwe ekupheliseni iziyolo ezithile ukuphumeza ubudlelane obukhulu noMoya, ukuphepha ukuzonwabisa ngokwesini, iziqholo, okanye ixesha lokuzonwabisa inokuthathwa njengokuzila ukutya kukaThixo.
EBhayibhileni sinokubona indlela UDaniel wayeka ukusebenzisa iziqholo okanye njengaseKorinte Kukho intetho malunga nethuba lokuyeka isondo ukuchitha ixesha elininzi uthandaza ixesha elifutshane.
Musa ukukhanyela omnye nomnye, ngaphandle kwesivumelwano kunye kunye nexesha, ukuba uzinikele emthandazweni. Emva koko dibanisa kwakhona, hleze uSathana akuhende ngokuswela ukuzibamba. KwabaseKorinte 1: 7-5
Ukuba unengxaki yempilo efuna ukutya okungqongqo, olu hlobo lokuzila luyenye into elungileyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka ulumke khetha into engaphazamisiyo kubomi babanye abantu. Umzekelo, kwimeko ye iintlobano zesini, ngokukhawuleza oku kufuneka ibe nemvume yeqabane.
Ungaludibanisa olu hlobo lokuzila kunye nokutya okukhawulezayo ukuba uyafuna. Akukho mithetho inzima kwaye ikhawulezayo. Xa uthatha isigqibo sokuzila ukutya, khetha uhlobo lokuzila olulungele imeko yakho kwaye ulungelelanise ukuze ulisebenzise kakuhle ixesha lakho noThixo.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku likuncedile ukuba uqonde Zingaphi iindidi zokuzila ezikwiibhayibhile kwaye zezantoni?. Kwaye ngoku ufuna ukufunda Ukoyisa ukufa, ukubrawuza fumanisa kwi-intanethi.